Tsiazotafo : Olona efatra maty nianjeran’ny rindrina -
AccueilSongandinaTsiazotafo : Olona efatra maty nianjeran’ny rindrina
Lehilahy miisa efatra no indray maty tsy tra-drano vokatry ny fianjeran’ny rindrina trano iray narodana teny Tsiazotafo, omaly antoandro tokony ho tamin’ny 11 ora. Naman’izy ireo iray hafa kosa no naratra mafy, izay mbola manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly Hjra amin’izao fotoana izao. Araka ny angom-baovao natao teny an-toerana, dia nandritra ny fotoana niasan’ireo mpanao trano miisa 32 teo ho eo no nitrangan’ny loza. “Nisy kamio iray nandalo ka nihovitra io rindrina io, ary nihotsaka vao nifatratra tany amin’izy ireo. Raha nidaboka izany, dia betsaka izahay no indray maty tao”, hoy ny fanazavan’ny iray tamin’ireo mpiasa nanatri-maso ny zava-nitranga. Vokatr’izay loza tsy nampoizina izay, dia lehilahy miisa dimy no indray tototry ny tany teo am-pananganana fototra vaovao teo amin’ilay toerana. Maty teo noho eo ny efatra tamin’ireo niharan-doza raha toa ka mbola afaka niantso vonjy ny fanindiminy, ka nifamonjen’ireo namany, ary avotra soa aman-tsara na dia naratra mafy aza. Tonga teny an-toerana avy hatrany moa ny mpamonjy voina sy ny teo anivon’ny polisim-pirenena nijery ifotony ny zava-nisy sy nandray ny andraikiny vantany vao nahazo fampandrenesana.
Tamin’ny 01 ora tolakandro no hita ny razana voalohany, ary ora roa taorian’izay ny faharoa. Tamin’ny 05 ora tany ho any kosa vao nipoitra ny fahatelo, raha toa ka mbola nitohy hatramin’ny harivariva ny fitadiavana ilay vata mangatsiaka faninefany. Raha ny fanampim-panazavana hatrany ihany koa, dia mbola nisy nirodana ny ampahan’io rindrina io tamin’ny fotoana nikarohan’ireo mpamonjy voina ireo razana, ka izay no nahasarotra ny fitadiavana ireo vatana mangatsiaka izay mbola tototra fanindroany indray. Isan’ny nampahonena tao anatin’ity tranga ity ny fahafantarana fa mpiasa vao niditra io omaly io ny raim-pianakaviana iray 47 taona isan’ny namoy ny ainy. Namela mananon-tena sy kamboty enina mianadahy ity farany ary raha ny nambaran’ny reniny, dia vao teraka tamin’ny roa volana lasa ny zanany farany. Eo anatrehan’ity voina ity, dia mipetraka ny fanontaniana hoe efa nahazo alalana avy amin’ny kaominina ve ny fananganana fotodrafitrasa vaovao teo an-toerana sa fanorenana tsy ara-dalàna.
Na dia anjaran’ny minisiteran’ny Fahasalamana tanteraka aza ny fahasalamam-bahoaka, dia voatery niditra an-tsehatra ny primatiora, mandray ny andraikitra hamehezana izany. Ny faran’ny herinandro teo noho izany, dia nisy ny fivoriana tsy ara-potoana izay notanterahina tetsy ...Tohiny